Iyo Oedipus Nhema: Pfupi Pfupiso - UniProyecta
Munguva dzekutonga kwevanamwari veOlympian, aisave ese mafambiro uye nzendo dzinonakidza. Paivewo nemadzimambo anofa airatidzira ngano dzechiGiriki, ari mambo oedipus mumwe wavo. Asati asvika pachigaro, aive mwana akasiiwa nevabereki vake, kunyangwe mushure memakore, hupenyu hwakavawana zvakare.
Ndinokukoka kuti uverenge nezvazvo nyaya inosiririsa apo mambo aigona kutiza nhamo yake, yakagadziriswa neshoko rakaipa kubva asati aberekwa. Kuvapo kwaOedipus kwainge kwatocherechedzwa uye zvakaitika sekufunga kwavo, kupedza mazuva ake ekupedzisira mukutambudzika uye kurwadziwa kwakadzika.
1 Ndivanaani vaive vabereki veOedipus?
2 Oedipus anowana sei chokwadi chehupenyu hwake?
3 Izvo zviporofita zveOedipus zvakazadzikiswa sei?
4 Kwokupedzisira kuenda kuOedipus
Ndivanaani vaive vabereki veOedipus?
Iyi ndiyo nyaya yaOedipus, mudiki muchinda mwanakomana wevanhu vaviri vanofa: Layo naJocasta. Varume ava vaida kuona ramangwana ravo kuburikidza chirevo chedelphi, sezvaiwanzoitwa mutsika dzekare dzechiGiriki.
Ichi chirevo hachina kumuunzira chero chinhu chakanaka kune uyu mwana asati aberekwa. Akaudza vabereki vake kuti dangwe rake raizomuuraya nekuroora amai vake, izvo izvo Laius ainetseka nazvo. Pakazvarwa mwana, baba vake vakatuma shamwari yake kuti imurasise, asi akange asina moyo wekugumisa hupenyu hwake. Saka akasungira tsoka dzake pamuti paGomo reCiteron.
Wakafanirwa kufa, mufudzi akanaka anonzi Forbas akamuwana ndokuenda naye kuna tenzi wake Polibo, mambo weKorinde. Iye anozoendesa kumukadzi wake waanoda, mambokadzi Merope. Iye, achifadzwa nechiitiko chetsitsi chemurume wake anodiwa, anosarudza kugara naye. Ivo vaviri vanotora mwana semwana wavo uye vanozvidaidza kuti oedipus, izvo kwavari zvaireva "tsoka dzakazvimba." Kubva ipapo anova muchinda weKorinde.
Oedipus anowana sei chokwadi chehupenyu hwake?
Oedipus panguva yehudiki hwake airatidzika kunge akanyatsodzidziswa mune zvemauto kurovedza. Vamwe vavaidzidza navo vaiitira shanje, ndosaka vakavaudza kuti: "Wakarerwa, vabereki vako chaivo havana kumbokuda." Oedipus, akakuvadzwa neaya mazwi makukutu, anobvunza mambokadzi chokwadi chekwaakabva: "ndiudzei amai, ichokwadi here kuti hamusi mai vangu? Vabereki vangu ndiani? ". Kune izvo Mambokadzi Merope aigara achingoti ndiye uye hapana mumwe munhu.
Nekudaro, aive achiri kukahadzika, akatya, anosarudza kuenda kunzvimbo yekutaura yeDelphi kuti anzwe shanduro yake. Ikoko akanzwa chakasuruvarisa chinhu muhupenyu hwake: anga asiri mwanakomana wemadzimambo eKorinde, vabereki vake vaive madzimambo eThebes, avo vaisamuda nekuda kwekutambudzika kwake. Mashura ake aityisa, akashata. Saka akakurudzira kuti asamboenda kuThebes. Asi Oedipus haana kuteerera, akabva angoenda kuPocis, kubva panguva iyoyo nhamo dzezvakaziviswa zviporofita zvakatanga kuzadzikiswa.
Izvo zviporofita zveOedipus zvakazadzikiswa sei?
Kuvhiringidzika kwaOedipus kwakamuendesa kuti azadzise magumo ake anotyisa kuti chirevo chakamutongera. Achida kubvisa mashura ake, haana kuenda kuKorinde asi kuThebes, uko kwaizozadzikiswa. Ari munzira akasangana nechikwata chevarume vaakaparadza nekuti aifunga kuti vaizomurwisa, mumwe wavo aive Mambo Laius, baba vake chaivo. Asi Oedipus anga asati aziva uye zvinotora nguva yakareba kuti awane chokwadi.
Gare gare akarwiswa nechikara chikuru chinotyisa icho vafambi vese vaitya. Akange akazvipira kurwisa vafambi kana vasina kupindura enigmas dzake. Yakanga iri pamusoro peSphinx, chisikwa chinoshamisa chine muviri wembwa, muswe wenyoka, mapapiro eshiri, maoko emukadzi, nzwara dzeshumba, kumeso kwemhandara, uye izwi rechirume. Oedipus paakasangana naye mumugwagwa akamuudza chirahwe, icho chaakanzwisisa nenzira kwayo. Saka akaparara uye aisazomborwisa zvakare.
Wese munhu akapemberera kuparadzwa kweSphinx. Vakakoka mutambo mukuru vakapemberera nekuti aisazorwisa mumwe munhu. Zvakare, seri kwezvose izvi kwaive kuvimbiswa kwaCreon, mushakabvu waMambo Laius 'aimbova mukuwasha. Akapa ruoko rwehanzvadzi yake Jocasta nehumambo kune uyo akakwanisa kuburutsa iyo Sphinx. Aya ndo maizadzikiso echipiri chiporofita chechirevo: wedangwe aizoroora mai vake.
Kwokupedzisira kuenda kuOedipus
Kamwe iyo ruvengo Sphinx yaparadzwa, Oedipus naJocasta vanoroora sekupihwa nehama yavo. Munguva yehupenyu hwavo, vaive nevana uye vaifara chaizvo kutonga Thebes. Kusvikira dambudziko rasvika mudunhu. Dambudziko rinotyisa rezviitiko zvine njodzi rakapinda murunyararo nekubudirira kwevagari, zvichivamanikidza kuenda kuna mambo wavo Oedipus kutsvaga mhinduro.
Iwo marabhabhurosi emazera ese anonanga kumuzinda pamwe nemarauri nematavi emuorivhi. Pamwe chete navo aive mupristi waZeusi, uyo anotaura kuna Oedipus akamiririra vanhu vake: "Thebes, anovhundutswa nedambudziko uye haakwanise kusimudza musoro wake kubva mugomba rakadzika iro rakanyudzwa ...". Mambo Oedipus anovateerera kunyatsoteerera vozoenda kumba.
Zvichakadaro, iri kuuya Creon ine nhau dzakapihwa kubva kune chirevo chemwari Apollo. Aya mashoko haasi kukurudzira zvachose kuna mambo, nekuti zvinoonekwa kuti Mambo Laius akaurayiwa pasina kururamisira kuitwe. Mwari akaraira kuranga avo vaizviita, zvisinei nekuti vaive vanaani. Kana kamwe kururamisira kwaitwa, Thebes aizodzokera kune zvakajairika.
Mukutsvaga mhinduro, mambo anorayira kuunganidza mavara akachenjera se: Corifeo, Corifeo, Tiresias, aimbova mutumwa waMambo Polibo, aimbova mufudzi waLaius uye kunyangwe mukadzi wake Yocasta. Kuteerera kune mumwe nemumwe, iyo inosuruvarisa Oedipus yakasvika pamhedziso yekuti huporofita hunotyisa hwechirevo, kwaakatizira zvikuru kwaari, chakazadzikiswa.
Chii chakava muuyo une ngwavaira? Oedipus akadzingwa kubva kuThebes pamwe nevana vake. Jocasta akazviuraya aona kuti zvese zvaitika. Rudzi rwakazvarwa patsva uye vakatungamira hupenyu hwakajairika. Saka kupedzisa mazuva ekupedzisira aOedipus mambo, murume ane nhamo akaratidzirwa nezwi rakaipa kubva asati aberekwa uye aigara achimutambudza kusvika kumagumo ehupenyu hwake.
kudzidziswa » tsika nemagariro » Ngano dzechiGiriki » Nhema yeOedipus